Anyị bụ ndị na akụkụ-oge bi Holm | Holmbygden.se
– Anyị bi Central Stockholm, abụọ blocks si Stureplansgruppen, na-achọgharị ihe
ngụkọta iche. Ọ hụrụ na Holmsjön, i Vike. Norrland
n'ime obodo, ime obodo na mpaghara na-agwa ndị na-agụ. Ihe mgbaru ọsọ ọzọ bụ
Iji chọta ulo ochie nke na-abụghị “-eme Nchoputa Banyere rụzigharịa” ma otú
mbụ ọnọdụ dị ka o kwere.
– The ọhụụ bụ ịchọta udo, ka ọ nọrọ na window na ngụkọta juu,anya n'elu ahịhịa, n'ofè, emi odude ọhịa. ọ
naanị ụda bụ nna nna elekere uhuruchi. A nostalgic agụụ maka ihe nna nna anyị hà nwere mgbe ọtụtụ biri onwe-isi nri obodo.
– Anyị hụrụ ochie träpatrongården-anọ na-Rolling ubi Lake Holm na Holm si Church. Large bụ glazed
ulo-ìbà, ezumike, uloanumaanu, nchịkwa, woodshed, härbre, ịmụta mm. Ụfọdụ oké ọhịa ala na anyị wee bargain na niile na-eri ahụ dị ka ọkara a ụlọ na Stockholm.
– Anyị malitere na mweghachi nke isi ụlọ na okpomọkụ na dị ka nso 1870 - narị afọ version dị ka o kwere. Wepu hardboard na mirror ụzọ, mmepe nke ochie ådringsmålade pärlsponten, na oge wallpaper, si na ochie osisi ala, Mmelite nke stoves na cookers ígwè wdg. Ụfọdụ ụlọ ndị kpamkpam emebibeghị si 1800s.
– Anyị na-arụ ọrụ na-edu ndú na mmepe maka oru na ụlọ ọrụ na òtù na nwere ohere na-na anyị na ndị agadi ugbo banyere 40% nke oge, nile n'afọ.
– Mgbe ahụ, anyị nwere ezi ihe na kọntaktị na ndị mmadụ n'ime obodo. E a arụkọ ahụmahụ ka n'ozuzu gburugburu ebe obibi nke ebe ugwu udo na.
– Ugbu a, anyị mgbe nile elu mesiri Stockholm Managers nke nzukọ ọmụmụ iji na-achọta ya na ndị kwekọrọ na echiche nke na-ukwuu dị mkpa taa.
– Anyị hụrụ ihe niile anyị na-achọ na ndị ọzọ, na longs mgbe niile mgbe anyị na-na-ọzọ. Anyị nwetara traktọ na e nweghị njedebe nke pụrụ ichetụ n'echiche mgbe ọ na-abịa n'ihu ihe e kere eke nke ihe owuwu. “Iji hụ ya onwe-eju ya afọ woodshed ma na-enwe mma isi nke pine na spruce na birch ndị a balm maka mkpụrụ obi”.